टेलिकमले ल्यायो ‘आइसिटी डे अफर’ - Sagarmatha TV Sagarmatha TV
टेलिकमले ल्यायो ‘आइसिटी डे अफर’
१८ बैशाख २०७९, आईतवार १५:०४
काठमाडौँ – यही बैशाख १९ गते मनाइने चौथो राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस २०७९ को अवसरमा नेपाल टेलिकमले राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस अफर उपलब्ध गराउने भएको छ ।
कम्पनीका ग्राहकहरुका लागि नेपाल टेलिकमले अनलिमिटेड डाटा र भ्वाइससहितको कम्बो प्याक, डाटा प्याक र बोनस अन रिचार्ज उपलब्ध गराउने भएको हो । यो अफर बैशाख १८ देखि बैशाख २४ सम्म उपलब्ध हुने टेलिकमले जनाएको छ ।
अफर अन्तर्गत ३ दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिने ६ जीबी डाटा प्याक जम्मा रु. ९८ मा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी २४ घण्टासम्म प्रयोग गर्न सकिने एक एमबिपिएस अनलिमिटेड डाटा र अन नेट अनलिमिटेड कुराकानी गर्न सकिने प्याक जम्मा रु. ९९ मा उपलब्ध हुँदै आएको राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार दिवसको अवसरमा ५० प्रतिशत छुटसहित जम्मा रु. ४९ मा उपलब्ध हुने टेलिकमले जनाएको छ ।
८१४१५८११३ डायल गरी वा ‘नेपाल टेलिकम एप’ प्रयोग गरी सो सुविधा खरिद गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ । यसका साथै रु. २०० देखि रु. ४९९ सम्मको एमपोस रिचार्ज गर्दा दुई दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिने १ जिबीको डाटा प्याक र रु. ५०० तथा सोभन्दा बढीको एमपोस रिचार्ज गर्दा ४ दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिने २ जीबी डाटा प्याक पनि उपलब्ध गराइएको छ । यस अफरबाट ग्राहकहरुले लाभ लिई सूचना प्रविधिमैत्री बन्न थप सहयोग पुग्ने कम्पनीले अपेक्षा लिएको छ ।
« अघिल्लो समाचार |
भुलेर पनि स्मार्टफोन सफा गर्दा नगर्नुहोस् यी गल्ती
डोल्पा, मुगु, हुम्लामा छिटै केन्द्रीय प्रशारणको बिद्युत पुग्नेछः कुलमान घिसिङ
मृत्यु भइसकेका मानिसलाई पुनः जिवित बनाउने वैज्ञानिक
एक लाख म्यादी प्रहरीको भर्ना खोल्न अर्थको स्वीकृति, ४० दिनको तलबभत्ता पनि दिइने
गोही प्रजनन केन्द्रमा भालेको अभाव
एकैदिन उपत्यकामा १४ सयभन्दा बढी सवारी चालकमाथि कारवाही
लालबन्दी नगरपालिकाको नगर प्रमुख पदमा हालसम्म कांग्रेस अग्रस्थानमा, थप मतगणना…
हामी नेपालद्वारा ‘घोपा बचाउ अभियान’ धराने युवालाई हस्तान्तरण